1 Bilowga Q&A
1.2 2 – Waa maxay sababta meklē HTML?
1.4 Tallaabooyinka loogu talagalay Abuuritaanka Tavs pirmais HTML fails
2 1 – Sveika pasaule!
3 2 – HTML tagi
3.1 (2a) Galvas birkas
4 Kani waa h2 cinwaanka ah Tani waa h3 cinwaanka Tani waa h4 cinwaanka Tani waa h5 a jeeda Tani waa h6 a jeeda Izeja: Calaamadaynta calaamadaha Qoraalka html ee faylka ayaa lagu soo rogi karaa iyadoo la adeegsanayo tagsiyada formatēšana. Waxay noqon doontaa lagama maarmaan markaad rabto inaad ereyga ama lineka ku muujisid content. Kods: Waad sifeyn kartaa qoraalkaaga siyaabo badan. Waad Kalsoon , hoosta, slīpraksts , < > calaamadee, liiska ‘, supermisscript iyo ka badan! Izeja: Waxaad ka dhigi kartaa nambarada qaar ka soo jiidashada adoo isticmaalaya astaanta faallada. Koodhku wuxuu kuugu muuqan doonaa koodhka ilaha laakiin waa lama huraan. Isticmaalka ugu weyn ee buuggan waxaa loogu talagalay abuurista waraaqo html ah ee tixraaca mustaqbalka. Tusaale: -> (2c) Waxyaalaha kāposti ee muhiimka ah ee HTML Xirfadlaha waa qadar qiimo leh oo loo isticmaalo meel kasta. Ma arki doontid vasks boggaga internetka ah iyada oo aan ugu yaraan hal xiriiriye. Dhismuhu waa isku vid. Waxay leedahay furan iyo qayb xiran. Qoraalka aad rabto in aad ku dhegto wuxuu u dhexeeyaa iyo . Waxaa jira sifooyin qaarkood oo qeexaya meesha iyo sida uu isticmaaluhu u socdo ka dib gujinta. ahref = "" = Wuxuu qeexayaa xiriirka udhaxeeya. Xidhiidhku wuxuu u dhexeeyaa labada xigasho. bartilmaameed = "" = Waxay qeexeysaa haddii URL uu furi doono tabo cusub ama mid isku mid ah. bartilmaameedka "_ tukšs" waa loogu talagalay tabo cusub iyo bartilmaameedka "_ sevi" waa furitaanka isku mid ah. rel = "" = Waxay qeexaysaa xiriirka bogga hadda jira iyo bogga lala xiriirayo. Haddii aadan aaminin bogga ku xiran, waxaad qeexi kartaa rel = "nofollow". Kods: mērķis ="_blank" halkan riix si aad u inay Google tags. Waxa furi doonaa tab cusub. Riix halkan. Waxay sidoo kale kuugu geyn doontaa Google laakiin waxay u furi doontaa tabarka hadda. Izeja: Taariikhda muuqaalku waa mid kale oo muhiim ah oo aanad u malayn karin in Badan oo internetka ku salaysan sawirro. waa sumad is-xidhay. Uma baahna xiritaankii caadiga ahaa sida . Waxaa jira sifooyin aad u baahan tahay inaad ogaato ka hor intaadan si sax ah u adeegsan. src = "" = Tani waxay u taagan tahay qeexidda xidhiidhinta ilaha sawirka. Ku dheji xidhiidhka u dhexeeya xigashada labajibbaaran. hoose = "" = Waxay u taagan tahay qoraal kale. Marka sawirkaagu uusan ku dhicin, qoraalkan wuxuu siin doonaa dadka fikrad ku saabsan sawirka maqan. platums = "" = Wuxuu qeexayaa dhererka sawirka pikseļi. Dherer = = " = Waxay qeexaysaa dhererka sawirka pikseļi. Tusaale: Kani waa Googleplex ee 2014. gada augusts. Sawirkani wuxuu leeyahay ppmels platums iyo augstums dhererka xNUMX. Izeja: Talooyin: Ma dooneysaa inaad gasho sawir la riixi karo? Ku dhaji koodka sawir leh ‘birka’. Eeg sida ay u socoto. ama Liiska liituse waxaa loogu talagalay sameynta liis ah shayada. wuxuu u taagan yahay liisaska la isku daray (liitet lambarka) iyo waxay u taagan tahay liistooyin aan la xakameynin (dhibcaha xabadka). Waxyaabaha liiska ku jira gudaha ama waxaa lagu soo qoraa . liituse liiska. Waxaad haysan kartaa inta badan inta aad rabto gudaha gudaha ama birka. Kods: Qeybta 1 Qeybta 2 Qeybta 3 Tani waa liiska aan la xakamaynin: Qeybta 1 Qeybta 2 Šajga 3 Izeja: Miiska jadwalka waxaa loogu talagalay sameynta xog miisaan. Waxaa jira dhowr waxyaalood oo hoose oo qeexaya madaxyada miiska, safka iyo tiirarka. waa koodka waalidka dibadda. Taabtani, waxay u taagan tahay xariiqda miiska, waxay u taagan tahay tiirka miiska iyo waxay u taagan tahay madaxa miiska. Kods: Magaca Džo 27 < td> Ganacsade Karols 26 Kalkaaliyaha > Simone < / td> 39 Profesors Izeja: Fiiro gaar ah: Qiimaha gudaha gudaha ugu horeeya waa cinwaanada. Sidaas uzpūta, waxaan isticmaalnay taas oo saadyn ku yeelatay saamaynta qoraalka ah ee qoraalka. Šaksda Koukseda Waad kordhin kartaa kartida miiska iyadoo la adeegsanayo xubno miisisyo ah. Waxaa jiri doona waqtiyo markaad u baahan tahay inaad samayso miisas ballaadhan oo isku dhafan bogag badan. Isku-dubbarididda xogtaada mawduuca, madaxa iyo cagaha, waxaad u oggolaan kartaa in xakameeyo madax banaanida. Madaxa iyo qaybta jirka ayaa ku daabacan doona purvs kasta oo miiskaaga la duubay. Miisaanka koox-kooxeedyadu waa: = Si aad u duubto cinwaanka miis. Waxay daabacdaa purvs kasta oo kala duwan ee miiska. = Wixii macluumaad ah ee miis fadhiya. Waxaad lahaan kartaa inta badan ‘tote> marka aad u baahan tahay. A ‘tbody> birka macnaheedu waa koox gaar ah oo xog ah. = Si aad u qariso xogta hoose ee miis. Waxay daabacdaa purvs kasta oo kala duwan ee miiska. Fadlan ogow aysan qasab ahayn in la isticmaalo kooxaynta. Waxaad isticmaali kartaa si aad u sameyso jadwal aad u badan oo la aqrisan karo. Inkasta oo qaar ka mid ah kuwa horumarinta gaarka ah is si cad u isticmaalaan buqarrada sida CSS Doorashooyinka. Waa kuwan sida aan u miisaami karno miiska la miisaamey ‘, es: Kods: Magaca John 27 Ganacsade Karols 26 Kalkaaliyaha < Simone 39 Profesors Wadarta Dadka: 3 Izeja: Foomka qaabka waxaa loo isticmaalaa sidii loo abuuri lahaa foomamka isdhexgalka ee bogagga shabakadda. Foomka HTML waxaa ku jira dhowr waxyaalood oo isku xigta. Tusaale ahaan:,,, iwm. Nidaamka ficilka ee foomka waa mid aad muhiim u ah. Waxay ku tilmaameysaa server-yada ama purvs saddexaad oo ku saabsan feylasha macluumaadka. Wixii falanqayn ah, waxaad u baahan tahay inaad hore u qeexdo habka. Waxaad isticmaali kartaa mid ka mid ah laba hab oo, helitaanka ama boostada. Kusoo dir dhammaan macluumaadka qaabka qaabka qaabka uu Post kuugu soo dirayo macluumaadka ku jira qaybta fariinta. Waxaa jira noocyo fara badan oo ku saabsan foomamka. Nooca asaasiga ah ee aasaasiga ah waa qoraal. Waxaa loo qoray ‘ievades tips = "teksts">. Noocyada ayaa sidoo kale noqon kara raadiyaha, sanduuqa hubka, emailka iwm. Waa in noqotaa qaab tik gudbinta hoose ee hoose si loo abuong badhanka gudbinta. tag ayaa loo adeegsadaa sidii loo abuuri lahaa calaamadaha iyo isku-xidhka wax-qabadka. Xeerarka uruurinta calaamadaha leh qoraallada ayaa leh qiime isku mid ah oo loogu talagalay = "" sifo calaamad ah iyo id = "" sifo faahfaahin ah. Kods: Magaca Hore: Magaca Dambe: Sieviete Izeja: Fiiro gaar ah: Waxaan calaamad u jeediyay qiime aan jirin sababtoo ah kuma xidhnayn serveris kasta oo ka shaqeynaya macluumaadka. 3 – Habka HTML
4.5 stils = ""
5 Tani waa magac kale 4 – Kods Xayeysiin: bloķēt bloķēt rindiņu
6 Kani waa H2 cinwaanka. Waxay leedahay qaab Block. Tani waa kale H2 jeeda. Halkan qoraalka hoosta ku yaal wuxuu leeyahay muuqaalka Inline. Izeja: 5 – Ku-soo-jeedin labalaab ah oo ka muuqda hal-ku-dhigga HTML
7 6 – semantiskais HTML vs HTML-aan macno lahayn
7.1 Halkan waa liis ir kur qoran yihiin qaar ka mid ah tagsiyada HTML5:
8 Tani waa raksta nosaukums 7 – Xaqiijinta HTML
Dhibaatada tan la mid ah waa haddii aadan aqoon dhowr asaasi, waxaad si sahlan u heli kartaa dhibaato dhabta ah ee bloggaaga iyo inaad ku shaqaaleysiiso horumariye qiimo leh si loo xaliyo dhibaatada yar. Ma aha oo kaliya, laakiin abuuraya isbeddel ku yimaada boogaaga sida adoo ku daray qoraalka qoraalka caadada ah waxay u baahan tahay aqoon yar.
Iyo haddii aad la kulanto qaab-dhismeedka saturs uusan u muuqan mid sax ah, aqoonta HTML waxay kaa caawin kartaa inaad ku noqotid wadada.
Halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah nooca HTML ee hagaha HTML ee emuāru autori iyo kuwa aan ganacsiga lahayn ee ganacsatada online.
HTML waa laf-dhabarta internetka maanta. Malaayiin websaydh ayaa wada aasaasay internetka. Halka HTML ir nepieciešams xayndaab dhismeedka dhammaan shabakadahan.
HTML waa soo gaabinta Hyper Tdīters Markup Lxujo. Waa luuqadda caadiga ah ee loogu talagalay soo koobida waxyaabaha loogu talagalay shabakadaha internetka.
HTML waxaa matalaya "Elementi". Elementi ayaa sidoo kale loo yaqaan "Tagi".
2 – Waa maxay sababta meklē HTML?
Dareemaha webka ayaa kaliya samayn kara vietne marka ay ku qoran yihiin luuqadooda taageera. HTML waa luuqada ugu caansan ee ugu caansan waxayna leedahay aqbalaadda ugu sareeysa ee shabakadaha internetka.
HTML ma aha arrin xasaasi ah. Laakiin habka ugu wanaagsani waa in lagu qoro HTML kiisaska saxda ah.
Tallaabooyinka loogu talagalay Abuuritaanka Tavs pirmais HTML fails
Waxaad abuuri kartaa faylka HTML-aasaasiga ah adigoo isticmaalaya Notepad-ka kombiyuutarkaaga. Laakiin waxay noqon doontaa xanuun badan in la qoro xarfo fara badan.
Waxaad u baahan tahay redaktors redaktors. Tifatiraha koodhka wanaagsan wuxuu fududeynayaa inuu qoro oo abaabulo xeerar waaweyn.
1 – Sveika pasaule!
Mana boggaygii ugu horreeyay pasaules pasaule!
Hambaljo! Waad abuurtay faylkaaga HTML ee ugu horreeyay. Khasab ma’aha inaad fahamto waqtigaan. Goor dhow ayaan dabooli doonnaa.
Faylka HTML kasta wuxuu leeyahay qaab dhismeed caadi ah oo qaawan. Tani waa meesha ir vasks walba bilaabmaan. Iyo purvs kasta oo ballaaran ee kods ah ayaa ku iman doona qaab dhismeedka ka dib goynta hoos.
Marka aynu isku dayno inaan ka fahamno koodhka "Sveika pasaule!" Waxyaabaha soo socdaa waa qaybaha khasabka u ah fayl kasta oo HTML ah.
= Waa cadeyn udambeyn ah tajās ir HTML HTML. Waa inaad u sheegtaa ka hor inta tag.
= Tani waa asalka aasaasiga ah ee faylka HTML ah. Vasks kasta oo aad vasks u qori waxay u dhaxeysaa iyo .
= Tani waa qaybta macluumaadka macaamiisha ee biraawsarka. Qodobbada ku yaalla buuggu ma laha vasks muuqaal ah.
= Tani waa qeyb ka mid ah shabakadda webka. Waxa aad si dhab ah u aragto websaydhka waa soo bandhigida codadka u dhaxeeya iyo .
2 – HTML tagi
Calaamadaha HTML badanaaba waxay leeyihiin furitaan iyo xiritaan xarig ah. Taariiqda furan waxay leedahay erayga muhiimka ah ee ku wareegsan (<) oo ka weyn (>) calaamad. Taabbada xidhitaanka waxay leedahay wax kasta oo isku mid ah laakiin calaamad dheeraad ah oo dheeraad ah (/) ka dib markii ka yar (<) saxiix.
(2a) Galvas birkas
Dhammaan xarfaha madaxu waxay u dhexeeyaan iyo. Waxay ka kooban yihiin macluumaadka macaamiisha webka iyo makiinadaha raadinta. Waxay astaan ​​u leeyihiin vasks maqal muuqaal ah.
Isku xidhka bogga la xiriir bogga HTML-gaaga iyo ilaha dibadda. Isticmaalka ugu weyn wuxuu ku xirayaa bogga HTML oo leh qaababka CSS. Waa astaanta isku-xiran oo uma baahnid dhamaystirashada. Halkan Rel wuxuu u taagan yahay xiriirka faylka iyo src michaheedu waa isha.
Meta waa sheeko isku xiran oo bixiya macluumaad ku saabsan html fails. Makiinadaha raadinta iyo adeegyada kale ee webka isticmaalaan macluumaadkaas. Meta tagi waa daruuri haddii aad rabto in aad boggaaga ku hagaajiso matoorada raadinta.
Taariikhda qoraalka waxaa loo isticmaalaa oo ir ku jiraan qoraalka server-ka ah ama samaynta isku xirka faylka dibadda ah. Waxay lahaan kartaa laba sifo oo ku yaal sumadda furitaanka. Mid waa nooca iyo vidējais kālija waa isha (src).
Astaamaha ‘noscript’ wuxuu shaqeeyaa markii qoraallada curyaamiinta biraawsarka loo adeegsado. Waxay ka dhigeysaa purvs mid ku habboon kuwa aan u oggolaanaynin qoraallada boggooda internetka.
Nasiib! Skripti waa naafo.
waxaana ugu yaraan muhiim u ah
Qoraalka html ee faylka ayaa lagu soo rogi karaa iyadoo la adeegsanayo tagsiyada formatēšana. Waxay noqon doontaa lagama maarmaan markaad rabto inaad ereyga ama lineka ku muujisid content.
Waad Kalsoon , hoosta, slīpraksts , < > calaamadee, liiska ‘, supermisscript iyo ka badan!
(2c) Waxyaalaha kāposti ee muhiimka ah ee HTML
Xirfadlaha waa qadar qiimo leh oo loo isticmaalo meel kasta. Ma arki doontid vasks boggaga internetka ah iyada oo aan ugu yaraan hal xiriiriye.
Dhismuhu waa isku vid. Waxay leedahay furan iyo qayb xiran. Qoraalka aad rabto in aad ku dhegto wuxuu u dhexeeyaa iyo .
bartilmaameed = "" = Waxay qeexeysaa haddii URL uu furi doono tabo cusub ama mid isku mid ah. bartilmaameedka "_ tukšs" waa loogu talagalay tabo cusub iyo bartilmaameedka "_ sevi" waa furitaanka isku mid ah.
mērķis ="_blank" halkan riix si aad u inay Google tags. Waxa furi doonaa tab cusub.
Taariikhda muuqaalku waa mid kale oo muhiim ah oo aanad u malayn karin in Badan oo internetka ku salaysan sawirro.
platums = "" = Wuxuu qeexayaa dhererka sawirka pikseļi.
Dherer = = " = Waxay qeexaysaa dhererka sawirka pikseļi.
Kani waa Googleplex ee 2014. gada augusts.
Sawirkani wuxuu leeyahay ppmels platums iyo augstums dhererka xNUMX.
Talooyin: Ma dooneysaa inaad gasho sawir la riixi karo? Ku dhaji koodka sawir leh ‘birka’. Eeg sida ay u socoto.
Liiska liituse waxaa loogu talagalay sameynta liis ah shayada.
wuxuu u taagan yahay liisaska la isku daray (liitet lambarka) iyo
. liituse liiska. Waxaad haysan kartaa inta badan
waxay u taagan tahay xariiqda miiska,
waxay u taagan tahay tiirka miiska iyo waxay u taagan tahay madaxa miiska.
27 < td> Ganacsade
> Simone < / td>
Fiiro gaar ah: Qiimaha gudaha gudaha ugu horeeya waa cinwaanada. Sidaas uzpūta, waxaan isticmaalnay taas oo saadyn ku yeelatay saamaynta qoraalka ah ee qoraalka.
Waad kordhin kartaa kartida miiska iyadoo la adeegsanayo xubno miisisyo ah. Waxaa jiri doona waqtiyo markaad u baahan tahay inaad samayso miisas ballaadhan oo isku dhafan bogag badan.
Isku-dubbarididda xogtaada mawduuca, madaxa iyo cagaha, waxaad u oggolaan kartaa in xakameeyo madax banaanida. Madaxa iyo qaybta jirka ayaa ku daabacan doona purvs kasta oo miiskaaga la duubay.
= Si aad u duubto cinwaanka miis. Waxay daabacdaa purvs kasta oo kala duwan ee miiska.
= Wixii macluumaad ah ee miis fadhiya. Waxaad lahaan kartaa inta badan ‘tote> marka aad u baahan tahay. A ‘tbody> birka macnaheedu waa koox gaar ah oo xog ah.
= Si aad u qariso xogta hoose ee miis. Waxay daabacdaa purvs kasta oo kala duwan ee miiska.
Fadlan ogow aysan qasab ahayn in la isticmaalo kooxaynta. Waxaad isticmaali kartaa si aad u sameyso jadwal aad u badan oo la aqrisan karo. Inkasta oo qaar ka mid ah kuwa horumarinta gaarka ah is si cad u isticmaalaan buqarrada sida CSS Doorashooyinka.
Waa kuwan sida aan u miisaami karno miiska la miisaamey ‘, es:
Foomka qaabka waxaa loo isticmaalaa sidii loo abuuri lahaa foomamka isdhexgalka ee bogagga shabakadda. Foomka HTML waxaa ku jira dhowr waxyaalood oo isku xigta. Tusaale ahaan:,,, iwm.
Nidaamka ficilka ee foomka waa mid aad muhiim u ah. Waxay ku tilmaameysaa server-yada ama purvs saddexaad oo ku saabsan feylasha macluumaadka. Wixii falanqayn ah, waxaad u baahan tahay inaad hore u qeexdo habka.
Waxaa jira noocyo fara badan oo ku saabsan foomamka. Nooca asaasiga ah ee aasaasiga ah waa qoraal. Waxaa loo qoray ‘ievades tips = "teksts">. Noocyada ayaa sidoo kale noqon kara raadiyaha, sanduuqa hubka, emailka iwm. Waa in noqotaa qaab tik gudbinta hoose ee hoose si loo abuong badhanka gudbinta.
tag ayaa loo adeegsadaa sidii loo abuuri lahaa calaamadaha iyo isku-xidhka wax-qabadka. Xeerarka uruurinta calaamadaha leh qoraallada ayaa leh qiime isku mid ah oo loogu talagalay = "" sifo calaamad ah iyo id = "" sifo faahfaahin ah.
Fiiro gaar ah: Waxaan calaamad u jeediyay qiime aan jirin sababtoo ah kuma xidhnayn serveris kasta oo ka shaqeynaya macluumaadka.
Sifooyinka ayaa ah hal nooc oo wax ka bedelaya HTML tags. Waxay ku daraan nidaamyo cusub oo ku yaalla HTML tagus.
Astaamo waxay u egyihiin sida magac = "" "es" kuna fadhiya "Tagu tags". Qiimaha sifuhu wuxuu u dhexeeyaa ereyada labajibbaaran.
id iyo fasalka waa aqoonsiyeyaasha HTML tagi. Magacyo kala duwan ayaa loo qoondeeyey in kala kala duwan yihiin HTML oo isticmaalaya aqoonsi. Waxaad isticmaali kartaa hal aqoonsi ee fasalka si aad u kala duwan. Laakiin ma isticmaali kartid aqoonsi id ah oo ku saabsan qaybaha kala duwan.
Tani waa virsraksts ugu weyn
href waxay u taagan tahay tixraaca "Hiperteksta atsauce". Waxay tilmaamaan dadka isticmaala inay tixraacaan xidhiidhada. Ku dhajinta tag ‘wuxuu isticmaalaa href si uu u diro dadka isticmaala URL ujeedo.
hoose waxay u taagan tahay bedelaad. Waa qoraal nuqul ah oo isticmaalo marka sheyga HTML uusan kari karin.
stils = ""
4 – Kods Xayeysiin: bloķēt bloķēt rindiņu
Qodobbada qaarkood bija iyo jeer waxay bilaabaan khad cusub waxayna qaadaan ballaar buuxda. Kuwani waa "Walxaha" Bloķēt.
Waxyaabaha qaar ayaa qaadanaya kaliya booska loo baahan yahay mana ku bilaabaan xariiq cusub. Kuwani waa xubno ‘Inline’ ah.
Piem. , ,
Waxaad u baahan doontaa inaad kala soocdo waxyaabaha ka midka ah unugyada xayawaanka marka aad isticmaaleysid qaababka CSS. Hagahan HTML, vidējais aad muhiim u ah.
Su’aashan waa mid aad u cad. Vai Maxaad u isticmaali kartaa HTML? Hal xigasho ama laba dhibic labadaba? Dadku waxay u muuqdaan inay isticmaalaan labadaba laakiin midkee sax ah?
HTML, xigasho hal mar ah iyo xigasho labo waa isku mid. Vasks isbeddel ah kuma sameeyaan vasks soo saarka.
6 – semantiskais HTML vs HTML-aan macno lahayn
HTML semantiskais waa qaabka ugu dambeeyay HTML, oo ​​sidoo kale loo yaqaan HTML5. Waa qaabka la sooareray ee HTML iyo XHTML ir arī semantiskās vidus.
Waa maxay sababta HTML5 fiican taha? Qoraaladii hore, qodobbada HTML ayaa lagu aqoonsaday magacyada / fasalka. Tusaale ahaan: waxaa loo tixgeliyey maqaal.
HTML5 failā atzīmējiet waxay u taagan tahay maqaal iyadoo aan u baahnayn aqoonsi id / fasal.
Si aad u hesho HTML5, hadd makiinadaha raadinta iyo codsiyada kale ee internetka ayaa si fiican u fahmi kara bogga internetka. Tīmekļa vietne ir semantiska waxay xaqiijiyeen, kas paredzēta SEO izveidei.
Halkan waa liis ir kur qoran yihiin qaar ka mid ah tagsiyada HTML5:
= Waxay kuu sahleysaa inaad galiso faylasha maqalka adoon lahayn vasks dhibaato ah.
= Sida, waxaad ku dhejin kartaa fiidiyooga adigoo isticmaalaya buugkan adigoon vasks dhibaato ah lahayn.
Tani waa raksta nosaukums
Intā badana xirfadlayaasha webka ayaa ansixiya koodhkooda kadib markii ay dhammeeyeen. Maxay muhiim u tahay in an ansixiyo kood marka ay shaqaynayso?
Waxaa jira laba sababood oo lielaogal ah oo lagu ansixinayo codsiyadaada:
Waxay kaa caawineysaa inaad sameyso koodhkaaga kumbuyuutarka iyo kumbuyuutarka iskutallaabta. Koodhku ma muujin karo khalad kasta oo ka mid ah browserkaaga hadda, laakiin waxaa laga yaabaa in mid kale. Aqoonsiga kods wuxuu hagaajin doonaa.
Mashiinnada raadinta iyo barnaamijyada kale ee websaydhka ayaa laga yaabaa inay joojiyaan inay ku xannibmaan boggaaga haddii aad khaladaad ku jirtid Waxaad ku xaqiijin kartaa adigoo ansaxinaya inaadan khalad weyn dhicin.
Xaqiijinta W3C waa adeegga ugu caansan ee loogu talagalay aqoonsiga koodhka. Waxay leeyihiin habab badan oo lagu ansixiyo sharciyada. Waxaad faylka geyn kartaa faylka ama si toos ah ugu geyn kartaa lambarka mashiinka ansixinta.
HTML waa mawduuc sagaidīja barasho ah. Noocyo cusub oo cusub oo HTML ah ayaa laga yaabaa inay dakhso u yimaadaan. Sidaas daartoja waa inaad cusbooneysiisaa oo aad ku sii jirtaa barashada. Tababarradu waa maxay HTML.
Tixraac tiešsaistes ah: W3Schools
PDF formātā: TutorialsPoint